9:00 am - Monday January 22, 2018
Home » Posts Tagged "xulka"
Tag Archives xulka
Boqorkii Kubadda Cagta Pele Oo Cusbitaal...
Halyeygii kubadda cagta Brazil ayaa loola cararay cusbitaal ku yaalla waddanka Brazil gellinkii hore ee Khamiista. 77 jirkan oo la filayey in uu toddobaadkan u socdaalo magaalada London oo lagu sharfay xaflad qado oo ay u sameeyeen Ururka Qoreyaasha Kubadda cagta (FWA), ayaa uu kusoo booday xanuun... read more »
Real Madrid Oo Guul Xummad-Jebin Ah Ka G...
Gool uu dhamaadkii ciyaarta u dhaliyey Marco Asensio ayaa Real Madrid u saamaxay inay guul dirqi ah ka gaadho kooxda yar ee Leganes oo ay isku haleeleen lugta koowaad ee tartanka Copa del Rey oo marxaladda Semi Finalka loo gudbayo. Real Madrid oo ay ka maqnaayeen ciyaaryahannada hoggaamiya sida... read more »
Wakhtiga Uu Zidane Ka Tegayo Real Madrid...
Wakhtiga Uu Zidane Ka Tegayo Real Madrid Oo La Ogaaday
Dhibaatooyinka badan ee aan marnaba lasii saadaalinin ee hoosta u dhigay Real Madrid, waxay sabab u noqonayaan in uu tababare Zinedine Zidane raaco dariiqii ay shaqadooda ku waayeen macallimiin tiro badan oo uu madaxweyne Florentino Perez shaqada ka caydhiyey. Real Madrid ayaa markii ugu horreysay,... read more »
Cajiib! Taageereyaasha PSG Oo Cay U Miis...
Cajiib! Taageereyaasha PSG Oo Cay U Miisay Neymar Markii Uu Dhaliyey Goolka...
Neymar ayaa markii u horreysay taariikhdiisa casriga ah ee Yurub, waxa uu u dabbaal-degay afar gool oo wada socda oo uu hal ciyaar dhaliyo, waxaana ay ahayd kulan ay PSG ku burburisay Dijon oo ku dhamaaday 8-0. Laba ka mid ah goolasha waxa dhaliyey Angel Di Maria, Cavani ayaa mid ku darsaday, mid... read more »
Halyeygii kubadda cagta Brazil ayaa loola cararay cusbitaal ku yaalla waddanka Brazil gellinkii hore ee Khamiista. 77 jirkan oo la filayey in uu toddobaadkan u socdaalo magaalada London oo... read more »
Gool uu dhamaadkii ciyaarta u dhaliyey Marco Asensio ayaa Real Madrid u saamaxay inay guul dirqi ah ka gaadho kooxda yar ee Leganes oo ay isku haleeleen lugta koowaad ee tartanka Copa del... read more »
Dhibaatooyinka badan ee aan marnaba lasii saadaalinin ee hoosta u dhigay Real Madrid, waxay sabab u noqonayaan in uu tababare Zinedine Zidane raaco dariiqii ay shaqadooda ku waayeen... read more »
Neymar ayaa markii u horreysay taariikhdiisa casriga ah ee Yurub, waxa uu u dabbaal-degay afar gool oo wada socda oo uu hal ciyaar dhaliyo, waxaana ay ahayd kulan ay PSG ku burburisay Dijon... read more »
Espanyol Oo Soo Afjartay 29 Kulan Oo Aan Laga Badinin Barcelona, ...
Kulan rikoodhe laga qabtay Lionel Messi oo ka dhacay magaalada Barcelona, ayaa waxa foodda isku daray kooxaha kubadda cagta Espanyol iyo Barcelona oo magaalada ka wada dhisan. Ciyaartan oo ka... read more »